DAAWO VIDEP:Maxamed BK oo yiri”Fanaan Somaliland Aqoon san Show Kuma Qaban karo hargeysa” – Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
HomeMaqal Iyo MuuqaalDAAWO VIDEP:Maxamed BK oo yiri”Fanaan Somaliland Aqoon san Show Kuma Qaban karo hargeysa”
DAAWO VIDEP:Maxamed BK oo yiri”Fanaan Somaliland Aqoon san Show Kuma Qaban karo hargeysa”
July 18, 2019 marqaan Maqal Iyo Muuqaal, Wararka maanta 4
Wasiir Puntland oo iscasiley Iyo sababtu isku casiley
AKHRISO:- DFS oo kudhawaaqday guddiga shirka dib uheshiinta Galmudug.
Waar umada beenta kadaaya fanaan kadtaa waa iman karaa hargeysa
Hargeysa shanta somaliyeedba maanta
way joogan oo waa dagan yahiin
ader umada nacayb iyo naxli hakala dhex dhigina.
Fanka” & Suugaanta”:-Laxan (Af-Ingiriis: Melody; Af-Carabi: لحن) waa habka iyo nidaamka dhawaqa hees leedahay, taasi oo fanaan ku luuqeeyo. Laxanka waxaa loo sameeyaa si heesaha loo kala sooco isla markaana loogu qurxiyo iyo macaaneeyo dhadhanka hees, gabay iyo ereyo loogu talogalay in dad lagu madadaaliyo.
Sida caadiga ah heesaha Waxaa marka hore alifa abwaan, ka dib ayaa laxanka la saara, muusig loo sameyaa, ilaa ugu dambeynta fanaan ku luuqeeyo. Sidoo kale, heesta marka laxanka la saaro ayaa muusiga loo samayn karaa. Guud ahaan laxanadu way kala duwan yihiin, kala macaan yihiin. Laxanka heesaha Soomaalida wuxuu ka tirsan yahay shan dhawaaq nooc la yidhaahdo.(fanka Qabiil Ma Leh)Siyaasad shaqo kuma Leh.?
xaaji saalax salaan gobeed . Hadal nin si u yiri, ninna si u qaaday?
Fanka & suugaanta Qabiil iyo Siyaasad Shaqo kuma Leh
Weligay xaarre Saalax oo weedhsan ku hadlayo maanta ayan arkay ( war ummadda beenta ka daaya hargaisa shanta somalia 🇸🇴 Way ku dhan yihiine dadka hakala dilina , erayadan ma ahan kuwii aan ku aqaannayXaarre Saalax iyo kuwa la fikirka ah ee beenta iyo huudaada lagu marin habaabiyay.